Andravoahangy : noravaina ilay trano tsy ara-dalàna | NewsMada
Andravoahangy : noravaina ilay trano tsy ara-dalàna
Notontosaina ny zoma teo ny fandravana ny trano hazo iray izay tafiditra anaty « alignement» tetsy Andravoahangy. Voalaza fa tanin’ny kaominina ity nanorenana trano natao toerana fitadiavam-bola, ity araka ny fanapahan-kevitra laharana LF 42/98 tamin’ny 29 septambra 1998, izay nanome alàlana an-dRamatoa Rasoarisoa Mariette, hanofa ny tany atao hoe « Lovasoanineny ».
Ny 06 desambra 2013 anefa, namoaka ny fanapahan-kevitra laharana 053-CUA/Délib.13, ny avy eto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, mikasika ny fanafoanana ity fanapahan-kevitra LF 42/98 tamin’ny taona 1998 ity.
Ho tohin’izay, namoaka ny didim-pitondrana laharana faha 468-CUA/DS/CAB.14 ny avy ao amin’ny kaominina, mandidy an-dRamatoa Rasoarisoa Mariette hamerina ny tany ho amin’ny laoniny.
Tsy nanaiky anefa ity farany fa nampiakatra ny raharaha teny anivon’ny fitsarana. Nangataka izy ny hanafoanana ity didim-pitondrana ity saingy resy, tsy nahazo rariny teny anivon’ny fitsarana.
Tamin’ny 14 septambra 2016 no namoaka didy mazava ny fitsarana, didy laharana 34/CRCECS/AP izay midika fa manan-kery ary mihatra avy hatrany ny didim-pitondrana izay navoakan’ny kaominina laharana faha 468-CUA/DS/CAB.14.
Marihina fa efa nisy ny fifampiresahana teo amin-Ramatoa Rasoarisoa sy ny kaominina tamin’ny 07 febroary 2017 ary efa samy nahazo ny didy avy teny amin’ny fitsarana avokoa na ny andaniny na ny ankilany.
Manentana hatrany ireo manao fanorenana tsy ara-dalàna ny kaominina mba hampitsahatra izany. Rehefa miakatra eny amin’ny fitsarana ny raharaha dia tokony samy handray ny andraikitra tandrify azy mivantana vao maharay ny didim-pitsarana.